News – Kaad Institute
Daah-furka Daraasadda Wadada Garacad-Galkacyo-Galdogob
Waxaa maanta si rasmi ah deegaanka Garacad loogu Daah-furay Daraasadda Waddada Garacad, Gaalkacyo iyo Galdogob, taasoo qorshuhu yahay in la saaro laami tayo leh. Machadka Cilmi Baarista iyo Daraasaadka KAAD oo horay howlo uga soo qabtay Soomaaliya iyo Puntland ayaa ku guulaystay qiimaynta lagu samaynayo waddada 3G. Daraasadda lagu samaynayo waddadaan oo muhiim u ah […]
Machadka Cilmi baarista iyo daraasaadka ee KAAD ayaa magaalada Garoowe ee caasimada DPL ku qabtay Dood cilmiyeed ku saabsan Sare u qaadida ka qaybgalka bulshada ee Doorashooyinka tijaabada ah ee golayaasha deegaanka Puntland oo markii ugu horaysay ka dhacaysa Puntland iyadoo dadweynuhu ay codkooda dhiiban doonaan soona dooran doonaan golayaasha Deegaanka ee Puntland. Doodaan oo […]
Machadka Daraasaadka ee KAAD oo Tababar u qabtay Golaha Sare (BOARD)ka ee shikadda Dekadda Garacad dhisaysa ee WADAAGSIN
Machadka Daraasaadka ee KAAD institute ayaa soo gabagabeeyey tababar soconayey 3 maalmood oo Machadku u qabatay golaha sare (BOARD)ka ee shikadda dekadda garacad dhisaysa ee WADAAGSIN Waxaana uu tababarkaan kaan ku saabsanaa xaga hogaaminta (leadership) iyo sare u qaadista aqoonta golaha ee maamulista shirkadaha wadaaga ah.
kulan wadatashi oo ku aadan doorka Haweenka ee Doorashooyinka, hogaaminta Qaranka iyo hormarinta Nabadgelyada ayaa Machadka cilmibaarista KAAD ku qabtay Garoowe.
Machadka Cilmi baarista iyo daraasaadka ee KAAD ayaa soo gabagabeeyey shirweyne wadatashi ah oo kusaabsan sare u qaadista doorka Haweenka ee ka qaybgalka siyaasada, hormarinta Amaanka iyo arimaha bulshada kaas oo ay kasoo qaybgaleen haween ka kalayimid gobolada kaladuwan ee Puntland, xildhibaano, wasiiro iyo madax kasocotay haween waynaha Puntland. Shirkaan wadatashiga ah ayaa ay haweenku […]
Waxaa magaalada Garoowe ee caasimada Puntland si rasmi ah looga daahfuray Machadka Cilmi baarista iyo Tababarada ee KAAD oo dhawaan laga aasaasay Soomaaliya, waxaana daahfurkii xafladaan ka qaybgalay madax uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha Wakiilada Puntland, kuxigeenadiisa, wasiiro, Xildhibaano, Siyaasiyiin, aqoon yahano iyo madax kale oo katirsan dawlada Puntland ee Soomaaliya oo imika xarunta ugu wayn […]
Xaflada Daah-Furka Machadka Kaad